Malwarebytes Browser Nche na-enye ndị kasị na kasị dịrị nchebe nchọgharị ahụmahụ. Ọ nkanka trackers na obi na ebe nrụọrụ weebụ mgbe nzacha si manụ na mgbasa ozi na ndị ọzọ na-achọghị ọdịnaya. Ọ bụkwa ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị mbụ nke ụwa nwere ike ịchọpụta ma gbochie aghụghọ aghụghọ teknụzụ. Nwere ike ịchọgharị na ntanetị ruo ugboro...
Renegade Racing bụ egwuregwu ịgba ọsọ na-agba agba nke adrenaline jupụtara. Mee aghụghọ aghụghọ na ọsọ iji nweta Turbo. Crazy unlockable ụgbọala, otu na ọtụtụ egwuregwu ụdịdị, na ibu nke edinam na-echere gị na a mba ike ndọda ụwa. Ọrụ zuru oke ma meghee ụwa ọhụrụ na Renegade Racing, site na ọdụ ụgbọ mmiri na-arụ ọrụ na ọnọdụ ọrụ, na...
Budata Asphalt 8 Asphalt 8, ya na aha ya bụ Asphalt 8: Airborne, bụ egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala enwere ike igwu na kọmputa na ngwaọrụ mkpanaka (gam akporo, iOS). Egwuregwu ịgba ọsọ a ma ama na Windows Store maka Windows 10 PC nwekwara ike igwu na Windows 7 PC na BlueStacks. Inye ihe omuma di ngbako di elu ya na injin ya na physics na ihe...
Hill Climb Racing 2 bụ egwuregwu kachasị mma egwuregwu na-agba ọsọ na ikpo okwu gam akporo, ma anya ma na usoro nke egwuregwu. Negwuregwu ịgba ọsọ na-akwụghị ụgwọ, nke na-enye egwuregwu dị jụụ na obere ekwentị na usoro njikwa ya ọhụụ, anyị na-edochi agwa anyị maara na ụgbọala na-acha uhie uhie aha ya bụ Bill. Ihe ngosi ngosi ngosi...
HappyMod bụ ngwa nbudata mod nke enwere ike itinye na ekwentị gam akporo dị ka APK. HappyMod bụ ngwa ebe ị nwere ike ibudata 100% mods na-arụ ọrụ maka egwuregwu gam akporo a ma ama dịka Otu nime anyị, Brawl Stars, Minecraft, Roblox. Na mgbakwunye na ụdị egwuregwu, ngwa HappyMod na-enyekwa ụdị nke ngwa gam akporo ama ama dịka Spotify na...
WhatsApp Plus APK bụ ngwa eji eme ihe na ekwentị gam akporo na-agbakwunye atụmatụ ndị ọzọ na ngwa WhatsApp. WhatsApp Plus anaghị esonye na Facebook, ọ bụ usoro nke atọ. Ngwa WhatsApp na-ezighi ezi nwere ike ibute adịghị ike nchekwa. Mgbe ibudata ma jiri ya, ibu ọrụ bụ nke onye ọrụ, Tamindir na ndị editọ anaghị anabata ọrụ ọ bụla. Ọ...
TextNow bụ ngwa nweta nọmba ekwentị nefu ị nwere ike ibudata na ekwentị gam akporo gị dịka APK. Mgbe ịchọrọ nọmba ekwentị America, ịnwere ike inweta ya nefu site na ngwa a, kpọọ oku na-akparaghị ókè ma zipụ ozi na nọmba ekwentị enyere. Ọ bụ nnukwu ngwa na-enye gị ohere ịnweta ọrụ ekwentị na-enweghị ụgwọ ekwentị, ọ dịkwa netiti ngwa...
Ashampoo Registry Cleaner bụ windo ndekọ Windows. Ndebanye aha Cleaner na-eme ka gị na kọmputa ngwa ngwa na ndị ọzọ mụ site ihichapụ rụrụ arụ, enweghị isi na ihe mmapụta Ndenye. Budata Ashampoo Registry Cleaner Ashampoo Registry Cleaner na-enyocha ihe ndekọ ahụ, na-achọpụta ma na-edozi ndenye nrụrụ aka, enweghị isi na enweghị isi. Site...
Ebumnuche mmepe ngwa ngwa Flutter bụ arụmọrụ dị elu nke mmepe ngwa. Site na mmemme nke Google nyere nkwado, ị nwere ike mepee ngwa mkpanaka gị ọsọ ọsọ ma rụọ ọrụ karịa. Enwere m ike ịsị na Flutter, nke bụ usoro dị mma maka ntinye na ojiji, ndị mmepe ngwa ngwa ga-enwe nnukwu ekele maka ya. O zuru ezu ịgụnye Flutter, nke nwere sistemu...
Ezighi ezi Engine 4 bụ otu nime igwe egwuregwu eji azụlite egwuregwu vidio. Enwere ike iji ya site na egwuregwu mkpanaka gaa nyiwe VR. Ezighi ezi Engine 4 bụ engine egwuregwu. Unrael Engine, nke Epic Games mepụtara, ebutela ọtụtụ egwuregwu na-aga nke ọma ruo ugbu a. Igwe a, nke nwere ihe niile maka egwuregwu, emeela ka ewu ewu ya ma...
Android Studio bụ ọrụ nke Google na nefu nke ị nwere ike iji zụlite ngwa gam akporo. Android Studio bụ usoro zuru ezu na nefu nke emere maka ndị mmepe ngwa gam akporo. Ihe omume a na-abịa site na ọtụtụ ngwaọrụ ndị nrụpụta gam akporo.Inwere gam akporo Studio, nke nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu ndị dị mgbagwoju anya, ị nwere ike ọ...
Anaconda Navigator nwere ngwa ọrụ niile dị mkpa maka ndị chọrọ ịzụlite Eke Ọgba na Windows. Nkesa Anaconda; Ọ gụnyere ngwa ọrụ ndị nrụpụta niile ga - eme ka ọ dịrị gị mfe iwulite ngwa mmụta igwe na eji eme ihe .fọdụ nime sayensị IDE nke na-abata na Anaconda Navigator; Ọkachamara ọkachamara dịka Jupyter, Jupyterlab, Spyder na RStudio....
Kate Editor bụ Editọ Ederede maka Windows. Kate bụ onye editọ ederede ọtụtụ elele nke KDE nwere ike ịrụ ọrụ na ọtụtụ akwụkwọ. Igosipụta mpịachi koodu, okwu nkọwapụta okwu, ikechi okwu na-agbanwe agbanwe, akara agbakwunyere, ntinye ngwa mgbakwunye, yana nkwado ederede dị mfe, ọrụ Kate nwere ike ime na nnukwu ọrụ abụọ: nchịkọta akụkọ...
Easyzọ dị mfe iji duzie ule nchekwa nke ọrụ gị. Metasploit bụ ngwanrọ nchedo nke na-enye ozi gbasara enweghị ike, na-enyere aka na nyocha ịbanye na ntinye aka IDS. Metasploit na enyere gị aka ịme karịa ịchọpụta adịghị ike, jikwaa nyocha nke ndị nche, ma melite mmata nche site na ịkpa arụ. Na subprojects nke Metasploit, a na-ahụ data...
Iji ngwa nkọ Ọkọwa okwu, ị nwere ike chọọ ozi ị na-achọ na akụrụngwa dị mma. A na-ebipụta ngwa ngwa Dictionary dị ka mmemme nefu ị nwere ike iji mgbe ị na-eme ozi ọ bụla ma ọ bụ nyocha data na kọmputa gị na nke na-ekpughe nsonaazụ nke ozi achọrọ site nọtụtụ ebe. Ọ bụ ezie na interface ahụ adịchaghị mma ma bụrụ nke a haziri nke ọma,...
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ kpakpando, mbara ala, nebulae na ọbụna ụzọ milky dị na mbara igwe site na ọnọdụ gị na-enweghị telescope, Stellarium na-eweta ihe a na-amaghị ama nke ohere na ihuenyo kọmputa gị na 3D. Stellarium na - eme ka kọmputa gị ghọọ planetarium nefu. Nwere ike ịga njem dị ịtụnanya na mmemme nke gosipụtara igwe niile dị ka...
Nwere ike belata ụdị na ederede na Easy Cut Studio Easy Cut Studio bụ usoro mmemme na-enye ndị ọrụ ohere ibelata font True ma ọ bụ OpenType, belata SVG ma ọ bụ PDF. Easy Cut Studio ọ bụghị naanị na-enye ndị ọrụ ohere ịkpụ mkpụrụ edemede na ụdị dị na dọkụmentị, kamakwa ọ na - enyere gị aka ịkpụ ụdị ma ọ bụ ederede ederede nụdị ị kwadebere...
DWG FastView bụ mmemme emere maka gị iji lelee ọrụ AutoCAD na kọmputa dị na Windows. DWG FastView, DWG na DXF wdg na Windows. Ọ bụ mmemme na-enye gị ohere ịlele faịlụ na ndọtị. Ihe omume a na - akpọ AutoCAD bụ otu nime mmemme enwere ike iji rụọ ọrụ nihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ọ bụla chọrọ ịse ihe ntanetị. Usoro ihe omume a, nke...
Преузимање Асхампоо Пхото Оптимизер 2018 је на врху претраге оних који желе бесплатан програм за уређивање фотографија. Асхампоо Пхото Оптимизер 2018 је апликација за уређивање фотографија која се користи на рачунарима заснованим на оперативном систему Виндовс.Асхампоо Пхото Оптимизер 2018 издваја се као један од истакнутих софтвера...
Watermark foto gị na efu ọnwụ ọnwụ. WonderFox Photo Watermark bụ mmemme ị nwere ike iji tinye akara ngosi mmiri na foto na kọmputa Windows gị. M na-ekwu maka nnukwu mmemme nke na-enye ihe karịrị mmiri nsị mmiri 150 nefu, nkwado maka onyogho na ederede mmiri, ndebiri emere, ngwa ndezi, ntụgharị mgbanwe, na ndị ọzọ. You nwere ike rụọ ọrụ...
Site na Onye nchekwa Amamihe, ị nwere ike zoo faịlụ gị na folda gị nefu, na-egbochi ndị ọzọ ịnweta data nkeonwe gị. Onye maara ihe na nchekwa nchekwa bụ faịlụ na nchekwa nchekwa nefu. Ndị ọrụ nwere ike zoo faịlụ ha na folda ha na mpaghara nkebi ma ọ bụ ngwaọrụ mbughari site na enyemaka nke mmemme ahụ. Ihe omume ndị a zoro ezo enweghị ike...
Notepad3 bụ onye editọ ị nwere ike iji dee koodu na ngwaọrụ Windows gị. Notepad3, nke emepụtara megide Notepad, nke agbanwebeghị ma mezigharị ya na 20 afọ nke akụkọ Windows na nke e mere maka ndị mmepe sọftụwia, nwere ike ịkwado ọtụtụ asụsụ. otu oge. Ọ bụkwa a Scintilla dabeere ederede nchịkọta akụkọ. Maka nke a, ọ na - eji obere nchekwa...
A tọhapụrụ Anno 1800 dị ka egwuregwu atụmatụ. Anno 1800 bụ usoro 2019 nke egwuregwu atụmatụ dị na mmepe kemgbe ọtụtụ afọ. Anno 1800, nke Blue Byte mepụtara na nke Ubisoft bipụtara, pụtara dị ka otu nime usoro egwuregwu emere ogologo oge. Anno 1800, nke dị iche na egwuregwu egwuregwu ndị ọzọ yana usoro ya gbanwere ngwa ngwa noge mgbanwe...
Maxnote bụ ihe edeturu iji ngwa ị nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ Windows. Maxnote bụ ihe edeturu na-ewere ngwa ị ga-eji na kọmputa gị Maxnote na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile ndị asọmpi ya nwere ike ime nefu na mpaghara asọmpi a dị ukwuu. Nwere ike tinye ndetu na ngwa nime sekọnd ole na ole ma chekwaa ya. ...
Image tuner bụ a free na ihe ịga nke ọma oyiyi edezi omume na ị nwere ike mfe ime gị kwa ụbọchị na-edezi ihe oyiyi. Ọtụtụ ndị ọrụ achọghị ọrụ atụmatụ nke mmemme dị ka Photoshop iji rụọ ọrụ ntinye ihe oyiyi dị mfe na nke nkịtị. Nihi na, nozuzu, ọrụ anyị na-arụ kwa ụbọchị na faịlụ oyiyi; Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ mmemme na ahịa nwere ike...
Reshade bụ ngwa na-edozi pikselụ nke foto ị buru ibu ma mepụta onyonyo ka mma. Reshade bụ ụdị ngwa ntinye ederede. Kwesịrị ịhụ na ogo nke foto ọ bụla nwere obere mkpebi na-ebelata mgbe ị na-ewetara ya mkpebi dị elu dị elu ịchọrọ. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịme ihe dịka ịchọ ụdị mkpebi kacha ibu nke eserese ahụ iji dozie nsogbu a, oge ụfọdụ...
PDF Unlock bụ ngwa nke Uconomix mepụtara nke na-ewepu okwuntughe site na faịlụ PDF. PDF Unlock bụ mmemme maka imeghe faịlụ ezoro ezo nke PDF. PDF Unlock ga-arụnyere obere oge mgbe ịpịrị ịwụnye faịlụ ahụ ga-akpọrọ gị ozugbo na ihuenyo ụlọ. Mana tupu iru ogo a, jide naka na etinye NET Framework na kọmputa gị. Ọ bụ ezie na enweghi ike ịme...
Ọ bụrụ n ị na-achọ onye njikwa faili smart na ngwa ngwa ijikwa faịlụ gị, ịnwere ike ịnwale ngwa Orion Njikwa faili. Orion Njikwa faili ngwa na-enye gị ohere ịhazi faịlụ gị na ngwa gam akporo gị Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi vidiyo, eserese, akwụkwọ, egwu, egwu faịlụ, faịlụ APK na faịlụ nchekwa na ekwentị gị na ị na-achọ ngwa njikwa njikwa faili...
Firefox Quantum bụ ihe nchọgharị weebụ nke oge a maka ndị ọrụ kọmputa na sistemụ arụmọrụ Windows, na-erepịa obere ebe nchekwa, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Anyị nwere ihe nchọgharị weebụ nke na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa ụdị ọkọlọtọ nke Mozilla Firefox, na-erepịakwa obere akụrụngwa ma na-enye interface dị ugbu a. Inye ohere ịzụta, ichekwa ibe...
Ezubere maka gam akporo, Zombie Frontier 4 bụ egwuregwu zombie mbụ mara mma. Ndị na-egwu egwu na-anakọta ihe na ngwa agha, na-alụ ọgụ na-adịghị anwụ anwụ, lelee zombies, na-enweta ezigbo mmetụta apocalyptic. Ọhụrụ ntọhapụ nke usoro, xZombie Frontier 4, nwere ike ibudata site na Google Play na gam akporo igwe! Budata Zombie Frontier 4 ...
Site na Glary Tracks Eraser, ị nwere ike ihicha faịlụ na akụkọ na-enweghị isi na diski ike gị. Ihe nchicha Glary Tracks Eraser bu ezigbo ihe eji ehichapu uzo gi na komputa gi ma enwere ike iji ya. Nihi ihu ọma ya, Glary Tracks Eraser na-achọpụta ngwa ngwa isi ihe dị mkpa iji kpochapụ na kọmputa gị ma nye ha gị, ọ ga-esokwa netiti ndị...
A free usoro mmezi ngwá ọrụ na-enye gị ohere nụzọ dị mfe ịrụ ndị dị mkpa njikarịcha Filiks mgbe a ụfọdụ oge nke na kọmputa gị. Glary Utilities bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke nwere ọtụtụ ngwa dị ike ma dịkwa mfe iji chebe, mee ọsọ ọsọ, rụkwaa kọmpụta gị. Nwere ike ịbawanye arụmọrụ sistemụ gị ọsọ ọsọ na nụzọ dị mfe yana ngwa ọrụ a na -...
Registry Reviver bụ mmemme nke ị nwere ike i scanomi ndekọ Windows, dozie njehie ma bulie ya. Registry Reviver bụ usoro ihe eji arụ ọrụ nke na-enye gị ohere idozi njehie ọ bụla na Windows Registry. Nwere ike ịbawanye arụmọrụ nke sistemụ gị site na enyemaka nke mmemme ahụ nke ga - enyere gị aka idozi ma bulie njehie na ndekọ ahụ. taabụ...